IBhayibhile Emalunga Neemitha Ezimbini Eyenzelwe Abantu Abangaboni Kakuhle
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiChol IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKonkani (saseRoman) IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTarascan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiValencian IsiXhosa IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo
Ngaphambi kokuba wenze uode iBhayibhile yeBraille kumaNgqina kaYehova, qiniseka ukuba unayo indawo yokuyigcina. Inguqulelo Yehlabathi Elitsha epheleleyo—ifumaneka ngeBraille yesiNgesi, yaseSpain neyaseItaly—inemiqulu engama-18 ukuya kwengama-28 kwaye ingakwazi ukuhlala kwindawo eziimitha ezimbini ubuncinane!
Ezinye zifuna indawo encinane kuneBhayibhile yeBraille. Abantu abangaboniyo bayakwazi ukubhala amanqaku ngezixhobo ze-elektroniki ezinamaqhosha ahla-enyuka ukuze abhale amagama ngeBraille. Iimfama zinako nokumamela iimpapasho zethu ezirekhodiweyo zisebenzisa inkqubo yekhompyutha ekufundelayo.
Ukongezelela, amaNgqina aye enza inkqubo yekhompyutha ekwaziyo ukubhala iBraille ngeelwimi ezininzi. Ufaka inqaku kulo matshini uze uqalise ukubhala amagama ngeBraille. Yenza kube lula kakhulu ukuba iimfama zikwazi ukuwafunda. Lo matshini uza kwenza kube lula ukubhala iincwadi kuquka iBhayibhile yeBraille, kuzo naziphi na iilwimi, nezo zingenazo iialfabhethi zesiRoma.
Kangangeminyaka engaphezu kweli-100, amaNgqina kaYehova aye enzela abantu abangaboniyo iincwadi, ezifumaneka ngeelwimi ezili-19. Nakubeni ezi mpapasho zifumaneka simahla, uninzi lwabantu abangaboniyo lunikela ngemali.
Ngokuqhelekileyo xa kukhutshwa incwadi entsha endibanweni, abaphulaphuli babexelelwa ukuba ayikabikho ngeBraille. Kulo nyaka uphelileyo, iofisi yesebe yaseUnited States yenza uhlolisiso lokuba ngyeyiphi indibano abaza kuya kuwo abantu abangaboniyo nokuba bangathanda ukuzifumana njani iincwadi zabo (kwiphepha elixholiweyo, umatshini we-electronikhi okanye umatshini ofunda izinto ezibhaliweyo).
Kwathunyelwa iincwadi zeBraille kwiindibano ezazineemfama, loo nto yabangela ukuba nabo bazifumane nomntu wonke iimpapasho ezintsha. Abanye bathunyelelwa iemail zeBraille emva kweveki yendibano.
Elinye iNgqina elingaboniyo lathi: “ Kwandivuyisa kakhulu ukufumana iincwadi ezintsha nomntu wonke. INdumiso 37:4 ithi uYehova uya kusinika izicelo zentliziyo yethu. Wenze loo nto ke kule mpela-veki! ” Omnye walila wathi: “ Ingathi bacinge ngam. Enkosi Yehova ngokusikhathalela kangaka. ”